DEG DEG: Matthijs de Ligt oo ka dagay Magaalada Turin si uu u dhamaystiro ku biiristiisa kooxda Juventus… + SAWIRRO – Gool FM
DEG DEG: Matthijs de Ligt oo ka dagay Magaalada Turin si uu u dhamaystiro ku biiristiisa kooxda Juventus… + SAWIRRO
(Turin) 16 Luulyo 2019. Ciyaaryahan Matthijs de Ligt ayaa ka dagay Magaalada Turin si uu u dhammaystiro ku biiristiisa kooxda Juventus, iyadoo la warinayo inuu Ajax kaga soo dhaqaaqay adduun dhan 75 milyan oo euro.
Iyadoo la filayo inuu Matthijs de Ligt tijaabada caafimaad berrito u maro kooxda Juventus ayaa markii uu soo dagay hadalkii ugu horreeyey oo uu yiri waxa uu ahaa: “Anigu run ahaantii aad baan ugu faraxsan halkaan.”
Suxufiyiinta ku sugan Talyaaniga iyo taageerayaasha kooxda Bianconeri ayaa xiddigan reer Holland kaga hortagay garoonka Caselle Airport ee magaalada Turin, waxaana uu difaacan diyaarad gaar ah ka soo qaatay Magaalada Amsterdam.
“Hello Bianconeri, kani waa Matthijs, anigu run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay halkaan.” ayuu yiri markii De Ligt uu ka soo dagay Magaalada Turin.
Difaacan oo 20-sano jirsan doona bisha soo socota ayaa ku qaatay xirfaddiisii oo dhan isagoo soo maraya akadeemiyadda kala duwan ee kooxda Ajax.
Berri oo Arbaco ah ayuu Matthijs de Ligt tijaabada caafimaad ku mari doonaa xarunta J-Centre ee Magaalada Turin, waxaana uu caawa seexan doonaa hoteelka cusub ee J-Hotel kaasoo ku dhow xarunta tababarka ee Continassa.
De Ligt ayaa go’aansaday inuu u saxiixo Juventus, inkastoo sidoo kale ay xiiseynayeen kooxo dhowr ah oo ay ka mid yihiin; Barcelona, Paris Saint-Germain iyo Manchester United.
“Kama caroonin Pogba sababa la xiriira hadaladii uu sheegay” – Tababare Solskjæ